Cudurka ka dilaacay Shiinaha oo maalin keliya uu dilay 242 qof oo ah tiradii ugu badneyd… – Hagaag.com
Cudurka ka dilaacay Shiinaha oo maalin keliya uu dilay 242 qof oo ah tiradii ugu badneyd…
Posted on 13 Febraayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dalka Shiinaha waxaa ka taagan xaalad adag oo ka dhalatay cudurka halista ah ee ka dilaacay qeybo kamid ah dalkaasi, waxaana cudurka Corona virus hada noqday mid kusii faafaya dalka Shiinaha iyo wadamo kale.
Cudurka Corona virus ayaa maalintii Talaadada gobolka Hubei ee dalka Shiinaha ku dilay 242-qof , waxaana tiradan ay noqotay tii ugu badneyd oo maalin qura u dhintaan cudurka halista ah ee Corona virus .
Gobolka Hubei gaar ahaan magaalada Wuhan ayaa ah halka uu ka dilaacay cudurkan, waxaana gobolkan ku sugan dadka ugu badan uu haleelay cudurka oo hadda la tacaalidiisa ay ku adkaatay dowlada Shiinaha.
Arrinta walaaca badan ku abuurtay dowlada Shiinaha ayaa noqotay 242-qof ee Talaadadii u dhintay cudurka Carona ay ku jiraan 135-qof oo cudurkan laga daweynayay waxaana hada sii adkaanaya in dadka uu cudurkan haleelay in ay soo kabtaan.
Cudurka Caronavirus ayaa ku dhacay dad gaaraya 60,264 qof , waxaana inta hada la xaqiijiyay cudurkan u geeriyooday 1,367-qof , waxaana jirta cabsi badan oo laga qabo in ay sii kordhaan tirada dadka u dhnta cudurkan.